အကျော်ကြားဆုံးနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာရထားလမ်းကြောင်းများဘာတွေလဲ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အကျော်ကြားဆုံးနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာရထားလမ်းကြောင်းများဘာတွေလဲ
တစ်ဦးသို့ဆွဲရထား၏ whooshing သံကို ဘူတာရုံ, နှင့်ပေါ်ရတဲ့နှင့်တစ်နေရာရာကိုသွား၏ဖြစ်နိုင်ခြေလုံးဝမျှော်လင့်မထားတဲ့. သငျသညျနာမည်ကြီးများနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာရထားလမ်းကြောင်းများထက် သာ. ကောင်း၏ဘာမှစဉ်းစားနိုင်သလား?
ရထားခရီးသွား၏ရွှေခေတ်တစ်သတိပေးချက်ဖြစ်ကြောင်း. ဘယ်အချိန်မှာလူအချိန်တွင်လလောက်ခရီးသွားလာ သွား. မြင်းများဖြစ်နိုင်သည်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြ. ခရီးသွားလက်ငင်းဆန္ဒပြည့်အကြောင်းကိုမဟုတ်ခဲ့သာဦးတည်ရာကိုမျှော်လင့်.
အဘယ်သူမျှမ, ခရီးသွားခရီးခံစားဓိပ်ပာ. စည်ထဲမှာထုပ်ပိုး, နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်သံလိုက်အိမ်မြှောင်နဲ့အတော်ကြာကောင်းသောမြေပုံ. ခရီးသွားသင်သည်အဘယ်သူမျှမရှိရာအရပ်၌သွားဓိပ်ပာ, ပင်လေထုထူးဆန်းသလိုခံစားရတယ်နှင့်သင့်အက္ခရာအိမ်မှာသာသင့်ပြန်လာပြီးနောက်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ.
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏စိတ်ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံး mode ကိုကိုးကွယ်အတွက်, ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားကိုသင်နာမည်ကြီးနှင့်သမိုင်းများစာရင်းကိုဆောင်တတ်၏ မီးရထားလမ်းကြောင်းများ သင်၌ယူသင့်တယ် 2019!
အရှေ့တိုင်း Express ကိုအပေါ်ဗင်းနစ်ဖို့လန်ဒန် – အဆိုပါအရှည်ဆုံးနာမည်ကြီးများနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာရထားလမ်းကြောင်းများ
ဤသည်အများဆုံးကျိန်းသေသမိုင်းဝင်နေ့စွဲအဖြစ်တက်နှစ်ဆလိမ့်မယ်! ဤသည်ဖြစ်နိုင်သည်အရှိဆုံးနာမည်ကြီးများနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာရထားလမ်းကြောင်းများနှင့်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ရင်ခုန်စရာရထား ကမ်ဘာပျေါတှငျလမ်းကြောင်း. ဒါဟာအစ္စတန်ဘူလ်၏ဘိုင်ဇင်တိုင်းမြို့သို့လမ်းကြောင်းအပေါ်ပဲရစ်ကနေထွက်ခွာ. သင့်ထံမှတစ်ဦးစံလက်မှတ်အားဖြင့်တတျနိုငျသ SaveATrain ဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားဖို့, ဒါမှမဟုတ်ပိုပြီးအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေ option ကိုရွေးချယ်နှင့်ပေါ်ခုန် orient Express ကို. ဒီဇိမ်ခံရထားများ၏ပယောဂနာမည်ကြီးမှုတ်သွင်းခံခဲ့တယ် Agatha Christie က. ဒီရက်က၎င်း၏ဝိညာဉျကို Belmond ရဲ့ဗင်းနစ်-Simplon Orient Express ကိုအတွက်ပေါ်အသက်ရှင်တော်မူသည်သေးမူရင်း form မှာမဟုတ်တော့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မယ့်. နှစ်ခုရထားရှိပါတယ်, တကယ်တော့, 1920 နှင့် 30 နှင့်တခြားကနေချိန်းတွေ့ရထားနှင့်တသားတသမိုင်းဝင်ဗြိတိန် Pullman စမီးရထားဖြစ်ပါသည်.
အသစ်လမ်းကြောင်းကနေသူ့ရဲ့လမ်းခငျြးက လန်ဒန် ဗင်းနစ်မှ, သည်အခြားအပါအဝင်အခါသမယတွင် ဥရောပ၌နေရာများ, သြဂုတ်လအတွင်းနှင့်တစ်ချိန်က-a-တစ်နှစ်မူရင်းပဲရစ်-အစ္စတန်ဘူလ်ခရီး.
Florence to Venice ရထားလက်မှတ်တွေ
Bologna to Venice ရထားလက်မှတ်တွေ
သင် ... သင့်တယ် ရထားပေါ်တွင်ခရီးသွား တစ်ကူးတို့အပေါ်ပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်. ဤသည်ဆက်ဆက်သင်၌ယူသင့်နာမည်ကြီးများနှင့်သမိုင်းဝင်မီးရထားလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် 2019!
ဒါကြောင့်, သင်ကူးတို့ရတစ်ချိန်ကအဘယ်အရာဖြစ်ပျက်? ကံကောင်းတာက မီးရထားခရီးသည် ရထားချွတ်ရနှင့်ကူးတို့သင်္ဘောတစ်ချိန်ကရှုခင်းကိုခံစားနိုင်ကြသည်. သင့်အနေဖြင့်ဖြတ်ကူးမယ် ဘောလ်တစ်ပင်လယ် တွင် 45 မိနစ်များ. တစ်ခုလုံးကိုရထားခရီးကြာရှည်ခံ4နာရီနှင့် 45 မိနစ်များ. ယင်း၏ Open-မျက်နှာကောက်နှင့်အတူကိုပင်ဟေဂင် အသားညှပ်ပေါင် နှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဒီဇိုင်းဗေဒတစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ပါသည် ကွာဟမ်းဘတ်စည်ကားနေပါတယ်ထံမှရထားလက်မှတ်, ဂျာမနီ သငျသညျသင်တန်းနိုငျကွောငျး, ကျွန်တော်တို့ဆီကဝယ်ယူ, သငျသညျဤ blog post ကိုရဲ့အဆုံးမှာတစ်ခလုတ်ကိုရပါလိမ့်မယ်.
ရေခဲမြစ် Express ကို - ဆွစ်ဇာလန်
နှစ်ခုချိတ်ဆက်ခြင်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့အများဆုံးသာယာလှပ တောင် အပန်းဖြေ, Zermatt နှင့်စိန့် Moritz, အဆိုပါ Glacier Express ကိုမှအများဆုံးစိတ်ပြေလျော့သွားနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် ဆွစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုခင်းကိုခံစား. သင်၌ယူသင့်ပါတယ်အရှိဆုံးနာမည်ကြီးများနှင့်သမိုင်းဝင်မီးရထားလမ်းကြောင်းတစ်ဦးအဖြစ်ကဒီရွေးကောက်တော်မူကြပါပြီအဘယ်ကြောင့် 2019?
Zermatt ကနေအရှေ့ဘက်သို့ခရီးထွက်, နေ့ကိုကြာခရီးစဉ်အဖုံးများ 91 ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့် 291 တံတားများ ဒါဟာအတိတ်တောင်ပိုင်းဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့အယ်လ်ပိုင်း Meadows မိတ်ဆက်အဖြစ်, ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရေကန်များ, နှင့်ရုပ်ပုံ-စုံလင်သောတည်း. ခရီး၏မီးမောင်းထိုးပြထားသည် Oberalp Pass ကိုပါဝင်သည်, မှာစီးနင်းအပေါ်အမြင့်ဆုံးအမှတ်ကို 6706 ခြေဘဝါး. နောက်ထပ်နာမည်ကြီးဖြစ်ပါသည် Landwasser Viaduct - တစ်ဦးခမ်းနားခြောက်မဟာဖွဲ့စည်းပုံမှာရပ်တည်မှု 200 ခြေတစ်ဦးသို့ဇောက်ချပါဝင်လာ ပြွန်ခေါင်းလမ်း ဖြောင့်တောင်ပေါ်သို့ဖြတ်.
Zermatt ရထားမှ Interlaken
Lucerne မှ Zermatt ရထားလက်မှတ်
အနောက်အဘိဓါန် Highland လိုင်း, စကော့တလန် - Mallaig မှ Glasgow
ကျနော်တို့လက်ရှိတီဗီစီးရီးစွဲနေ Outlander, အဟောင်းကို-ကျောင်းကိုစကော့တလန် Highlander အပေါ်အာရုံစိုက်ထားတဲ့. ဒါကြောင့်ဒီနာမည်ကြီးများနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာရထားလမ်းကြောင်းများ၏စာရငျးတှငျအံ့ဩစရာမရှိရှိပါတယ်. အနောက်နိုင်ငံတွေအဘိဓါန် Highland လိုင်းနိုင်ငံ၏ရိုင်းတွေ့ကြုံခံစားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, အနောက်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်း. စကော့တလန်ရဲ့အကြီးမားဆုံးမြို့ - - ရထား Glasgow အရွက်ပြီးတာနဲ့မြို့ပြရှုခင်းလျင်မြန်စွာစိမ်းလန်း Glen နှင့်ငြိမ်းချမ်း Loch မှအရှုံးပေး. မြောက်ဘက်ကိုဦးတည်, အနောက်နိုင်ငံတွေအဘိဓါန် Highland လိုင်း Rannoch Moore ၏ဝေးလံခေါင်ဖျား, တော၌ဖြတ်သန်း. ဒါဟာထို့နောက်မြင့်မားဘင်နေးဗစ်ဖြတ်သန်း, ဝိန်း Fort ဝီလျံအတွက်ဆင်းထိ. ဦးတည်ချက်သို့ပြောင်းပါနှင့်အနောက်ဘက်၌ရွေ့လျား, ရထားဟာ Glenfinnan Viaduct traverses (ထဲမှာ featured ဟယ်ရီပေါ်တာရုပ်ရှင် စီးရီး) Mallaig ၏စည်ကားဆိပ်ကမ်းမရောက်မီ.
ခရီးသည်တင်မီးရထားခရီးသွားလာ ၏အကြီးဗြိတိန်ပံ့ပိုးမှုများကို၏တစျခုဖွစျသညျ ဗစ်တိုးရီးယားခေတ်. 20 ရာစုမှာတော့, ရထားလမ်းစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ရထားလမ်းလေ့လာလိုက်စားသည့်ရထားလမ်းသူတို့ကိုယ်သူတို့အဖြစ်နီးပါးမြန် proliferated ကြဟန်. သမိုင်းဝင်ရေနွေးငွေ့ရထား, အထူး သာယာလှပခရီး, နှင့်ကျဉ်းမြောင်းသော gauge ရထားလမ်းပွနျလညျထူထောငျခဲ့ကြ. ဒီမှာ, သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးရေနွေးငွေ့ရထားနှင့်ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်အချို့ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ် ရထားလမ်းခရီး. Cornwall ၏အနောက်နိုင်ငံခုမှာသူတို့ကိုရှာမည်, Devon, Somerset, နှင့် Dorset.
ဤအရထားတွေအများကြီးရေနွေးငွေ့ရထားပွနျလညျထူထောငျနေကြသည်အဖြစ်, ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားသူတို့အပျေါမှာလက်မှတ်တွေပေးမထားဘူး. သို့သျောလညျး, ကျနော်တို့ကပေးပါဘူး အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်း ရန်နှင့်ဆီကရတဲ့အတှကျ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း.
ကျော်ရန်ပေါ်ဦးခေါင်းကို တစ်ဦးကရထား Save နှင့်၌သင်တို့၏လက်မှတ်ဘွတ်ကင်3မိနစ်များ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူပြီးရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ link ကို ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-historical-train-routes%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / es သို့မဟုတ် / က de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / ru ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#ကျြောစောသော #FamousTrains #HistoricTrains europetravel longtrainjourneys ဘူတာရုံ ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား